Scrub လုပ်တိုင်း ကောင်းသလား............. - Hello Sayarwon
Scrub လုပ်တိုင်း ကောင်းသလား.............
အသားအရေကို ​ကြည်လင်စေဖို့ Scrub လုပ်ကြတယ်နော်။ Scrub လုပ်တာက အရေပြားပေါ်က ဆဲလ်သေတွေကို အထိရောက်ဆုံး ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် Scrub ကို နည်းစနစ် မှန်မှန်လေး လုပ်တတ်မှလည်း အသားအရေက ကျန်းမာ​ကြည်လင်မယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
Scrub လုပ်တာ အသားအရေကို ဘယ်လို အထောက်အကူပြုလဲ
အသားအရေကို ပုံမှန် Scrub လုပ်တာက အရေပြားပေါ်က ဆဲလ်သေတွေကို အထိရောက်ဆုံး ဖယ်ရှားနိုင်မှာပါ။ ဆဲလ်သေတွေက အရေပြားပေါ်မှာ အလွှာတစ်ခုအနေနဲ့ ရှိနေကြပြီး အရေပြားရဲ့ အာဟာရစုပ်ယူနိုင်စွမ်းကို အဟန့်အတားဖြစ်စေနေပါတယ်။
ဆဲလ်သေတွေ အရေပြားပေါ်မှာ များလာတဲ့အခါ အသားအရေက ရေဓာတ်မပြည့်ဝတာ၊ အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလို အရေပြား ပိုးဝင်ကူးစက်လွယ်တာမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အရေပြား အပေါ်ယံလွှာ ကျန်းမာဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလိုပြောရတာက အရေပြား အပေါ်ယံလွှာက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ရှေ့တန်းခံတပ်ပါ။ အရေပြားက အသက်အရွယ် ကြီးရင့်လာတာနဲ့အမျှ ခံနိုင်ရည် နည်းလာပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ အရေပြားက လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေ စုပ်ယူနိုင်စေဖို့ အရေပြားကို သေချာလေး Scrub လုပ်ဖို့ လိုပါမယ်။
အရေပြားကို Scrub လုပ်တဲ့အခါ အသားအရေက
အစိုဓာတ် ထိန်းပေးတယ် စတဲ့ အသားအရေကို အထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကောင်း များစွာကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
Scrub က တစ်ပတ်ကို နှစ်ကြိမ်ဆိုတာက အများဆုံး လုပ်သင့်တဲ့အကြိမ်ပါ။ အသားကြည်တယ်ဆိုပြီး နေ့တိုင်းလုပ်တာက အသားအရေ ကြည်လင် ကျန်းမာစေဖို့ထက် အသားအရေကို ထိခိုက်စေဖို့ ပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက် သတိထားရမှာက Scrub လုပ်ပြီးတိုင်း အသားအရေကို ပြန်လည် ရေဓာတ်ဖြည့်ဖို့ပါ။ ဒါမှ ဘေးကင်းပြီး အသားအရေကို ကျန်းမာစေနိုင်တဲ့ Scrub လေးဖြစ်တော့မှာပါ။ Scrub လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း သဘာဝ ပစ္စည်းတွေနဲ့ လုပ်တဲ့ Scrub ရှိသလို ဓာတုပစ္စည်းတွေ ပါဝင်နေတဲ့ Scrub တွေလည်းရှိပါတယ်။ ဘယ်လို Scrub အမျိုးအစားဖြစ်ဖြစ် တစ်ပတ်ကို အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် အများဆုံး ၂ ကြိမ်က အလွန်ဆုံးပါ။ ဓာတုပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့ Scrub တွေဆိုရင် တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ် သူတို့ညွှန်တဲ့ အညွှန်းအတိုင်း လုပ်တာ အဆင်အပြေဆုံးပါ။
Scrub လုပ်တာက အရေပြားပေါ်က ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားရာရောက်သလို ချွေးပေါက်တွေကို ပွင့်စေပြီး အသားအရေကို ​ကြည်လင်စေမှာပါ။ အသားအရေကို လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေကို အကောင်းဆုံး စုပ်ယူနိုင်အောင် ထောက်ပံ့ပေးမှာ ဖြစ်တာကြောင့် အသားအရေကို ကျန်းမာစေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ထပ်တစ်ခေါက်ပြောချင်တာက အသားအရေ ထိခိုက်မှုကင်းစေဖို့ တစ်ပတ်ကို ၂ ကြိမ်ထက်ပိုပြီး Scrub မလုပ်ကြပါနဲ့။
Scrub ကို လိုတာထက် ပိုလုပ်မိတဲ့အခါ
Scrub လုပ်တာက အသားအရေအတွက် အထောက်အကူပြုတယ် မှန်ပေမယ့် လိုတာထက် ပိုလုပ်မိတဲ့အခါ အရေပြားက ခံနိုင်ရည် နည်းသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ရှေ့တန်းခံတပ်ဖြစ်တဲ့ အရေပြားကို ထိခိုက်စေမှာပါ။ တန်ဆေး လွန်ဘေးဆိုတဲ့အတိုင်း Scrub ကို အသားဖြူချင်ဇောနဲ့ နေ့တိုင်းနီးပါး လုပ်နေမယ်ဆိုရင်
ရှိပြီးသား ဝက်ခြံတွေ ပိုဆိုးလာတာ
အရေပြား ပိုးဝင်ကူးစက်တာ လိုမျိုး အရေပြားပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလို အသားအရောင် ပြောင်းတာ၊ အမဲကွက်တွေ ဖြစ်တာလိုမျိုး ပြင်းထန်တဲ့ အရေပြား ထိခိုက်မှုတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျန်းမာတဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ် ဒါမှမဟုတ် နှစ်ကြိမ်သာ Scrub လုပ်ပါ။ Scrub လုပ်တဲ့အခါ လက်ချောင်းထိပ်လေးတွေ သုံးလို့ ခပ်ဖွဖွလေး နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ပွတ်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ Scrub လုပ်ပြီးတိုင်း အစိုဓာတ်ထိန်းခရင်မ် လိမ်းပေးဖို့ သတိရပါ။
Is Scrubbing Safe for My Skin? https://www.adorebeauty.com.au/skin-care/exfoliators/guide/scrubbing-safety Accessed Date 26 May 2020
Scrubbing Or Exfoliating The Face: Harmful Or Helpful? https://www.sterlingminerals.com/scrubbing-or-exfoliating-the-face-harmful-or-helpful/ Accessed Date 26 May 2020
How scrubs harm your skin https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/beauty/how-scrubs-harm-your-skin/articleshow/12994343.cms Accessed Date 26 May 2020